Kedu ihe bụ akụkọ ihe mere eme nke Tour de France? - Azịza Kacha Mma
Isi > Azịza Kacha Mma > The tour de france history - ịchọta ihe ngwọta
The tour de france history - ịchọta ihe ngwọta
Kedu ihe bụ akụkọ ihe mere eme nke Tour de France?
N'ịbụ onye guzosiri ike na 1903 site n'aka Henri Desgrange (1865-1940), onye French na-agba ọsọ na onye nta akụkọ, a na-agba ọsọ ahụ kwa afọ ma e wezụga n'oge Agha Worldwa. Akwụkwọ akụkọ Desgrange, L'Auto (nke bụ L'Equipe ugbu a), kwadoro yaNjegharịiji bulie mgbasa.
The Tour de France bụ kwa afọ multi-ogbo okirikiri agbụrụ na-ewere ọnọdụ bụ isi na France na mgbe ụfọdụ na-agabiga mba ndị dị nso. Emere ihe karịrị izu 3 na July, ọ bụ ule na-agwụ ike nke ntachi obi nke mmadụ na-emetụta ihe dịka 3,500km karịa usoro 21 na ụdị ụzọ dị iche iche, iji tinye nke ahụ, nke ahụ bụ ihe dị anya site na London ruo Tel Aviv, New York na Las Vegas, ma ọ bụ Akụkọ ihe mere eme malitere na 1903 mgbe Géo Lefèvre, onye odeakụkọ na-agba ịnyịnya ígwè nke 26 maka oge egwuregwu egwuregwu na-egbu oge L'Autos, nyere echiche nke ịgba ọsọ ịgba ọsọ na nchịkọta akụkọ ya Henri Desgrange iji kwalite akwụkwọ akụkọ na akwụkwọ akụkọ ahụ mgbasa iji mụbaa. Henri nwere mmasị n'echiche ahụ ma meghee asọmpi ahụ karịa ụbọchị 19, site na July 1st ruo 19th agbụrụ ahụ dọtara ndị sonyere 60, onye nke ọ bụla kesara ego nrite nke 20,000 franc. 6,075 n'ime ha gara na onye mmeri mbụ njegharị, Maurice Garin.
Garin rutere na Paris ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ 3 awa mgbe onye na-agba ọsọ Lucien Pothier. Ma ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ awa 65 tupu 21st na onye ikpeazụ sonyere na njedebe. Naanị ndị ọkwọ ụgbọala iri abụọ na otu n’ime iri isii gwụrụ ọsọ mmeghe.
Thedị njegharị nke njegharị ahụ amabatara na mbido. N'ụzọ ụfọdụ, agbụrụ ahụ na-agwụ ike karịa ụdị nke oge a. Ndị sonyere ya ji ụkwụ na-aga n'okporo ụzọ ndị unyi nke France ehihie na abalị, n'ịnyịnya igwe kwụ otu ebe.
Njem mbụ emepere onye ọ bụla chọrọ isonye. A haziri ọtụtụ n'ime ndị na-agba ịnyịnya n'ìgwè nke ụdị ịnyịnya ígwè kwesịrị ekwesị iji lekọta ha. Akpọrọ ndị ọbịa sonyere 'Touriste Routiers' - ndị njem nke n'okporo ámá.
Ma kwere ka ha kere òkè, ọ bụrụhaala na ha ajụghị ndị nhazi ahụ. Fọdụ n'ime njegharị ndị kacha adọrọ adọrọ bụ ndị Touriste Routiers; enweghị ohere maka ndị mmadụ n'otu n'otu na njegharị ahụ mgbe 1930 gachara, na ihe mbụ Touriste Routiers furu efu kpamkpam, ọ bụ ezie na a nabatara ụfọdụ n'ime ndị na-agba ịnyịnya mpaghara nke Henri Desgrange 2nd mere njem na 1904, a hapụkwara ịnya ịnyịnya mgbe ọ na-aghọ aghụghọ na ndị ọka ikpe nwere ike ahụghị ndị na-agba ịnyịnya. Nke a belatara mkpụkọ kwa ụbọchị, mana ilekwasị anya na ntachi obi.
Desgrange kwuru na agbụrụ ya ga-abụ ihe siri ike nke na naanị otu ọkwọ ụgbọ ga-aga Paris. Ọdịdị na-achọsi ike nke agbụrụ ahụ jidere echiche nke ọha na eze na asọmpi a na-eme kwa afọ kemgbe mbipụta mbụ ya na 1903, belụsọ mgbe a kwụsịrị ya maka Agha Worldwa nke 2. Dịka njem ahụ nwetara aha na ewu ewu, agbatịkwu agbụrụ ahụ ma oke ya bidoro. ịgbasa gburugburu ụwa dị ka ndị na-agba ịnyịnya na-abanye n'ọsọ ahụ kwa afọ.
Taa njegharị a bụ ihe omume UCI World Tour, nke pụtara na otu ndị ga-esonye n'ọsọ a bụ ọkachasị ndị otu ọkachamara UCI belụsọ otu ndị ndị nhazi ahụ kpọrọ. Akwụkwọ nke Tour de France nke oge a nwere agba ụbọchị iri abụọ na otu ma ọ bụ ọkwa nke ejiri ụbọchị iri abụọ na atọ. Ọ bụ ezie na ụzọ nke Tour de France nke oge a na-agbanwe kwa afọ, ogologo oge nke agbụrụ ahụ ka dị otu, yana onye mmeri mechara bụrụ onye na-agba ịnyịnya ígwè na oge kachasị dị obere na ụdị 3 dị iche iche.
Nke a gụnyere ọnwụnwa oge. Nke igwe na-agba mgba n’otu n’otu megide igwe elekere ya na igwe ugbo elu ya na ngwa ya. Ewepụghị nkebi: Ọtụtụ mgbe ọsọ ọsọ ngalaba site French obodo.
Na ugwu nkebi: nke ahụ metụtara Pyrenees na Alps ma mejupụta akụkụ kachasị ike nke njem ahụ. All nkebi tụrụ si ruo n'isi. Agbakwunyere oge ndị ọkwọ ụgbọ ala ahụ.
Onye ọkwọ ụgbọ ala nke nwere oge kachasị dị ala bụ onye isi nke agbụrụ ahụ ma kwe ka ọ na-eyi uwe na-acha odo odo. Agbanyeghị, onye nwe uwe na-acha odo odo nwere ike ịgbanwe n'oge agbụrụ ahụ dabere na onye na-eduga na njedebe nke ọ bụla. Onye mmeri kachasị bụ onye ọkwọ ụgbọ ala nke a ga-enye onyinye edo edo na njedebe nke agba ikpeazụ nke agbụrụ ahụ emere na kwa afọ na Champs-Élysées na Paris kemgbe 1975.
Gịnị mere eji eji edo edo? “Ọfọn, L'Auto mbụ e bipụtara na odo odo newsprint, na-enye a ụzọ na-akwalite akwụkwọ akụkọ na n'oge ụbọchị nke ọduọ akụkọ ihe mere eme. Ma uwe na-acha odo odo, nke a makwaara dị ka 'Maillot Jaune', abụghị naanị onye na-agba ọsọ ahụ. Ọ bụ ezie na ọ na-adọta mmasị kachasị dị ka a na-enye onye mmeri mmeri.
Enwere ọkwa ndị ọzọ ma ọ bụ asọmpi n'ime njem ahụ. Kachasị na njiri aka ha dị iche. Ejiri akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ ma ọ bụ 'Maillot Vert' na-anọchite agbụrụ ndị kachasị mma.
fitbit ịgba ígwè ngwa
Egwuregwu polka dot na-egosipụta ugwu kachasị mma n'ọsọ ahụ. Ọcha na-acha ọcha na-egosipụta nke kachasị mma na mkpokọta nke ndị 25 afọ ma ọ bụ ndị na-eto eto. Ewezuga uwe ndị a pụrụ iche, ndị na-agba ịnyịnya nọ na nke ọ bụla n'ime ndị otu nwoke iri abụọ na otu ga-eyi otu uwe ahụ.
Ndị otu ọ bụla na-ebu akara nke ndị nkwado na-akwụ ụgwọ ọnwa ndị ọkwọ ụgbọala. Driversfọdụ ndị ọkwọ ụgbọala bụ uwe pụrụ iche. Dịka ọmụmaatụ, onye na-achị ụwa na-achị achị na-eyi agba ndị otu ya, mana na njiri mara mmadụ na ibe ya nwere agba dị larịị.
Ndị mmeri nke mba ugbu a na-eyi uwe ndị otu na agba nke mba ha. Ọnụ, ndị a niile na-agba dị iche iche na-etolite kaleidoscope nke agba agba na wiil a na-akpọ 'peloton'. Ọ bụkwa onyinyo nke peloton na-agagharị na mpaghara French mara mma na mpaghara ugwu na-eme ka Tour de France bụrụ otu n'ime egwuregwu egwuregwu kachasị mma n'ụwa.
Ma peloton abụghị naanị maka ịdị mma ma na-arụ ọrụ dị oke mkpa iji chekwaa ike onye na-agba ya. Nke a bụ n'ihi na peloton na-ebelata mgbanwe mgbanwe iji gbanwee ọdịdị iji mee ka ọdụdụ, isi isi, na ịnagide crosswinds na ịkwa osisi. Atụmatụ a maara dị ka edepụta akwụkwọ.
Gba ịnyịnya n'etiti otu ìgwè mepere emepe nke ọma ma ọ bụ onye na-agba ịnyịnya ígwè peloton nwere ike ichekwa ihe ruru pasent 40. Mana njem agaghị emeri site na iji France ma ọ bụ iyi otu uwe mara mma na-achọ naanị site na ịnya na peloton. N'oge ụfọdụ ndị ọkwọ ụgbọ ala ga-esi na mkpọ ahụ pụọ ma ọ bụrụ na ha chọrọ ịkwalite ogo ha n'ogo ọsọ ahụ.
Mgbe otu kewara, usoro a na-agbanwe agbanwe, na-ebute ihe a maara dịka ahịrị abụọ. Nke a bụ ebe atụmatụ otu egwuregwu ga-esi bata. Dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na ndị na-agba ịnyịnya bụ ndị otu ndị otu mejupụtara ma ọ bụ ndị otu egwuregwu dị iche iche na-anaghị atụ egwu ibe ha, ha nwere ike ịrụ ọrụ ọnụ nke ọma iji wepu onwe ha na ndị na-asọmpi peloton na ndị na-ama aka.
Agbanyeghị, ọ bụrụ na ndị na-apụ apụ bụ ndị na-agba ịnyịnya na ndị otu egwuregwu ma ọ bụ ihe iyi egwu n'ogo niile, ndị na-agba ịnyịnya nwere ike ịrụ ọrụ iji belata ha, gbochie ha ma ọ bụ gbochie ha. N'ezie, Tour de France bụ ihe omume n'otu n'otu n'echiche nke na onye ọ bụla na-agbanye pedal nke aka ya iji dozie ụzọ ahụ. Mmeri nke onye ọ bụla na-agba bụ ihe si na ndị otu na-achọghị ọdịmma onwe onye nanị pụta.Ọ dị obere ka onye na-agba ịnyịnya ígwè merie ọkwa n'emeghị ka ndị otu ya mara ihe nyeere ya aka ịgbago mmeri nke ọrụ ịnyịnya ibu, nke na-enyere onye ndu ya aka na-eme nke ọma ma ọ bụ, mgbe ụfọdụ, nanị ịlanarị.
Nke a nwere ike ịpụta ị nweta mmiri na ihe esi na ụgbọ ala otu na-ebugharị ha. Ma obu imeputa uzo site n’itinye otutu oge n’isi peloton nwediri ike itughari ma gbadata n’ugwu iji nweta onye otu ozo etigoro ma mee ka o laghachi n’agha. Na pụrụ iduga na-akpọ cracking.
Gbawa, ma ọ bụ ịkụ mgbidi, bụ ihe na-eme mgbe onye ọkwọ ụgbọala na-agwụ ike kpamkpam na enweghị ike ịhapụ ịga n'ihu. Ọ bụrụ na ọkwọ ụgbọ ala agbawaa ọ nwere ike ịda n'ụzọ dị egwu, tufuo oge bara uru yana n'ọnọdụ ụfọdụ ọ ga-agbada ọsọ ahụ kpamkpam. Ọtụtụ ndị ndu Tour de France atụfuola nsonaazụ njem ahụ n'ụzọ dị egwu, ọkachasị n'ihi na ha gbawara agbaze ugwu.
N’ezie, oge kachasị atọ ụtọ n’ọsọ a na-abụkarị mgbe ndị ọkwọ ụgbọala abụọ na-alụ ọgụ maka isi ngagharị ahụ, na-arịgo ugwu ndị ahụ, nwalee ibe ha n'uche na n'ụzọ anụ ahụ ma nwaa ịmanye onye nke ọzọ ịgbawa. Ya mere, ọ ga-ekwupụta na ị ga-abụrịrị nke kwesịrị ekwesị maka Tour de France. Ọtụtụ ndị ọkachamara na-atụle ya dị ka ihe siri ike nke ihe niile kachasị egwu egwuregwu na ndị sonyere na-ere ọkụ calorie 7,000 kwa ọkwa.
Chetakwa, otu onye na - agba ume calorie 2000 n’ụbọchị. Obi ọnụego nwere ike iru oke dị egwu ọbụlagogo na mgbago ugwu E kwenyere na obi onye mmeri nke Tour de France bụ Miguel Indurain dị 50% karịa nkezi ma nwee obi izu ike nke 28. Onu ogugu mmadu bu 60 rue 90.
Na ngwụsị nke agba ọsọ ahụ, nke nwere ike ịnwe elekere anọ ruo isii, ndị na-agba ịnyịnya ígwè ga-emerịrị ike ọgwụgwụ nke uche na nke anụ ahụ iji nọgide na-agba ọsọ karịa 60 km / h maka njedebe 5 ruo 10 nke agbụrụ ahụ. Mee ọsọ ọsọ ọsọ nke 75 ruo 80 km / h na njedebe. Ma ewezuga ịbụ onye kachasị agba ọsọ na inwe ike imeri nsogbu anụ ahụ na nke uche nke agbụrụ ahụ.
Mụ na ezigbo ndị n’azụ gị. Also ga-achọ ntakịrị chioma na Inwe akwara nke steala, enwere ọtụtụ ihe egwu nwere ike ime ka onye ọ bụla na-agba ịnyịnya nweta mmeri na njem ọjọọ. Dịka ọmụmaatụ, ewezuga ndị ọkwọ ụgbọ ala 198 ndị ọzọ na-agba ọsọ, ndị nwere ike ibute oke ntụtụ.
E nwere ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ọtụtụ ụgbọ ala ndị mejupụtara ụgbọ oloko ogologo nke ndị ọrụ nkwado, ndị na-ahazi agbụrụ na mgbasa ozi. Toghara ịsọ maka mgbada ugwu, ebe ndị na-agba ịnyịnya nwere ike iru ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ 80 km / h, ebe ntakịrị ntakịrị ma ọ bụ ndudue nwere ike iduga ọdịda dị egwu. Mgbe ahụ, e nwere nde mmadụ iri na abụọ ruo iri na ise ndị kwụ n’okporo ámá nke Tour de France ka ha nwee obere ịnụ ọkụ n’obi mgbe ụfọdụ.
Ihu igwe mechara bịa. Mmiri ozuzo, akụ mmiri ígwé, na ọbụna snow n’elu ugwu nwere ike ịpụta ụbọchị ọjọọ nke nwere ike iduga ọdịda ma ọ bụ ọbụlagodi oyi nke nwere ike imebi ohere gị, anwụ nwere ike ibute akpịrị ịkpọ nkụ na ike ọgwụgwụ. Yabụ ị ga - ahụ na Tour De France nwere ọtụtụ ihe maka ya.
Mana ihe a niile na-eme ka otu n’ime ihe ịtụnanya na-agaghị echefu echefu na egwuregwu nke ihu ụwa.
Gịnị mere Tour de France ji dị mkpa?
NaTour de Francebudị ịrịba amadị ka ihe omume ọdịbendị naFrancena-aga ogologo oge tupu anyịnya igwe. Enwere ike ịmaliteghachi ya na ndị na-eto eto na-amụ ọrụ nka na-agagharịFrancesoro ndị nna ukwu maara ihe na-arụ ọrụ na ngalaba ha ka ha wee mụta ọrụ ha. Nke a bụ usoro a maara dị ka 'Tour de France. ''
Kedu mgbe The Tour de France malitere?
Ọnwa Asaa 1, 1903
N'ikwu ya n'ụzọ dị mfe, na Tour de France bụ ihe omume ịgba ịnyịnya ígwè kasị ukwuu nke oge ahụ, nke a na-eme na July. Na njem ahụ, ndị na-agba ịnyịnya kachasị mma n'ụwa na-asọ mpi iri abụọ na otu gafee France maka ọnụahịa kachasị na ịgba ịnyịnya na-acha odo odo ugbu a, ọ bụrụ na ị hụbeghị agbụrụ ịgba ọsọ tupu njem ahụ, ọ nwere ike ịbụ ihe izu atọ izu atọ nke ịgba ọsọ kwa ụbọchị. ndị mmeri dị iche iche na ọtụtụ ndị nwere agba dị iche iche Jerseys siri ike idobe, yabụ anyị ga-agbaji ya na ntuziaka onye mbido a na Tour de Frost Gịnị bụ njem ahụ? The Tour de France bụ otu n'ime atọ nnukwu igwe kwụ otu ebe njegharị na ọ bụ? agbụrụ kachasị asọpụrụ na kalenda enweghị ajụjụ dị ka onye mmeri nke njem njegharị ahụ nwere 21 nke ọ bụla na-agbasa n'ime izu atọ ugbu a, usoro ọ bụla agbatịwo oge, onye ndu agbụrụ ahụ na onye mmeri zuru oke kpebisiri ike na a ga-atụle oge ngagharị ugbu a. na mgbakwunye na n'ozuzu ogo dị ka mkpokọta ogo ma ọ bụ izugbe nhazi ọkwa na gcas, nke ọ na-adịkarị zoro aka, ịbụ onye mbụ ịgafe agbaru ọ bụla ogbo na-anyanya ogbo-eto eto The tour na-agụnyekarị ụbọchị abụọ izu ike na-enweghị ọduọ, ọ bụ ezie na ndị na-agba ha na-apụ ma na-eme ikpere iji mee ka ụkwụ ha na-agagharị, mana ha na-ewepụ ụbọchị ndị a iji jide n'aka na ndị na-agba ịnyịnya nwere ike ịgbake ka ha wee nwee ike ịgba ịnyịnya ike dịka o kwere mee n'ụbọchị ndị na-abịanụ iji mee ka agbụrụ ahụ bụrụ ihe na-atọ ụtọ dị ka o kwere mee ugbu a Njegharị na-aga kemgbe 1903 na naanị nkwụsịtụ site na agha ụwa mbụ na nke abụọ malitere na mba agbata obi dịka Belgium, Netherlands, Great Britain na ebe ndị ọzọ, ugbu a agba nke mbụ nke agbụrụ ahụ bụ a na-ejikarị na mba a, mana ha na-aga France maka mmalite a maara dị ka Grand Departall, na-eme njem nleta Tour de France otu n'ime ọkwa ise dị iche iche na-ada na mbụ nkebi nke mbụ usoro ndị a na-enwekarị obere mmasị ma jiri ya mee ihe. agbụrụ dị n'agbata ugwu gafere mpaghara French, ugbu a ndị ọkachamara anyị na-akpọ ndị na-agba ọsọ na-emeri ha, ndị nwere ọsọ ọsọ karịa 70 kilomita kwa elekere ma ọ bụrụ na ị na-agba ọsọ gaa na njedebe na ebe kachasị ọsọ, mgbe ahụ anyị nwere ugwu nkebi ugbu a ugwu nke njeghari bu ihe omume bu isi na agba oso nke onye obula choro ka o buru akuku nke ndi nkiri na ndi n’agba mbo ndi a gbasaa n’agbata ugwu frenes na pyrenees na usoro ndi a di n’ime izu ato. nke ọtụtụ puku mita ịrị ugwu ị nwere ike ịkwụsị na nnukwu ugwu dị ka ebe nzukọ ma ọ bụ mgbe ụfọdụ mgbe nnukwu ndagwurugwu na-agba ọsọ mgbe nnukwu ịrị elu ugwu ndị a na-adịkarị mma na-etinye aka na ha bụ nnukwu mkpebi na-ekpe ikpe n'ozuzu oge ikpe ma ọ bụrụ na ịchọrọ imeri njem nke France ị ga-abụ ezigbo ikpe oge Nke ahụ pụtara na-agba ọsọ megide elekere, n'ihi na ọ bụ mbọ mmadụ n'otu oge nke ọ bụla ọkwọ ụgbọala na obere oge nke nkeji oge mgbe nke ọzọ gasịrị, ndị ọkwọ ụgbọ ala na-ejikarị ịnyịnya ígwè na ngwa ọrụ pụrụ iche ka ha wee nwee ike ịgba ọsọ ọsọ ọsọ dị ka o kwere mee na oge ha nwere ike ịnwale oge ọ bụla, site n'okporo ụzọ dị larịị ruo na ugwu na ọbụna ugwu dị ọcha na-enye ohere dị ukwuu maka ọkwa zuru ezu iji tinye oge dị ukwuu na ndị asọmpi. A na-anwale ule oge otu n'otu usoro ahụ dị ka ọnwụnwa nke oge en mana mana ndị otu ahụ na-eduzi ha ugbu a, otu ọ bụla na-apụ ma na-agbagharị na nhazi usoro iche n'echiche nnụnụ na-akwaga na nnukwu V usoro a na-enyere aka imebi ifufe ma debe ijeụkwụ dị oke ngwa ngwa ngwa ngwa dị ka ndị ọrụ ruo na njedebe dịka o kwere mee.
Mwakpo na-ebelata onye ndu site na ifufe, na-echekwa ike onye ndu ahụ n'okporo ụzọ ebe ụgbọ ala ha na-enweghị ike iru ha, na-enye ha igwe kwụ otu ebe ma ọ bụ igwe nke ha iji weghachite ha n'okporo ụzọ ozugbo enwere ike iweta agbụrụ, mgbe ọkwa ọ bụla nwere naanị otu onye mmeri ma ọ bụ naanị otu onye ọkwọ ụgbọala meriri njegharị a na ngụkọta mmeri ndị a bụ n'ihi ọrụ impeccable nke ndị otu egwuregwu asatọ na-etinye ya, ọ dịghị onye nwere ike imeri njem njegharị de France naanị ọ gaghị ekwe omume ilu ochie a na-arụkọ ọrụ ọnụ. na-eme ka nrọ ahụ nwee ihe ịga nke ọma na njem ahụ bụ ihe ngosi mara mma nke dị iche iche nke agba na-agbagharị site na France nke a ngwakọta nke uwe ndị na-eto eto sitere na ndị na-akwado nkwado logos na-atọ ụtọ na agba dị iche iche na-acha odo odo bụ n'ezie anya n'etiti ndị otu egwuregwu oge niile ị nwere ike ịchọta ugbu a Understandghọta Uwe ha You ga - ahụ uwe dị mkpa anọ dị mkpa nke na-ejedebe na nke ọ bụla The Le Mayo Jean jersey jersey bụ ihe osise kacha mkpa na nke kachasị mma nke ndị njem Tour de France. na nke kasị ala akwakọba oge na N'ezie ka ụbọchị, na jersey bụ odo, ekele na French magazine Auto, na kpọsaara mbuba na mmalite narị afọ nke 20, ọ e biri ebi na-apụghị ịkọwa edo edo akwụkwọ; ugbu a onye ọ bụla na-eyi a jersey na njedebe nke ogbo 21 ga-emeri Tour de France maka ndụ niile nke nkwanye ùgwù site n'aka ndị ọgbọ na Fans myiri na na-agbata n'ọsọ ego nke 500,000 euro ndị ọcha jersey le Mile Block na-acha ọcha jersey na-egosi onye na-eto eto kachasị mma nke mbuba nke a bụ ihe kasị mma enịm ọkwọ ụgbọala na n'ozuzu standings n'okpuru 25 January mbụ na nwoke ọduọ afọ 'kwere omume na-odo jersey na-acha ọcha jersey n'okwu a bụ ugbu a odo jersey ga-ahụ na-ebute ndị na-eto eto na-ebute ụzọ na nke abụọ Nkwụnye aka na-eyi akwa ọcha na njedebe nke njem ahụ onye ọkwọ ụgbọ ala kachasị mma na-ewe ụlọ 20,000 euro Onye na-acha akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ a na-akpọ Lumaio ver bụ onye na-agba ọsọ ọsọ n'ọsọ niile A na-enye onye ọkwọ ụgbọ ala mbụ ka ọ gafee akara njedebe kwa ụbọchị ihe ndị dị ọdịda Otú ọ dị, dabere na ụbọchị nke ụbọchị, na mgbakwunye na isi ihe ndị a, ụzọ nke ụbọchị ọ bụla na-agba agba na-akpọ etiti sprints na-abịa tupu agbata, ka agbụrụ ndị a r emain obi uto. A na-enye ndị na-agba ọsọ na-agba ọsọ ọsọ maka agba bọọlụ yana nke na-agba ọsọ na onye na-anya ihe kachasị Points na njedebe nke ọsọ ahụ na-eyi akwa na-acha akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ ugbu a, onye na-agba ọsọ na-anakọta akara a ma ọ bụ eyi ya mgbe ọ nwere mmeri nkebi ma na - abia mgbe nile n’elu 15, na nkebi ọ naghị emeri ma na - alụ ọgụ n’elu ugwu dị elu Maka ndị na - apụ apụ ị nwere ike ijide agba agba dị na etiti ọbụlagodi mgbe ị na - emeghị ọnụahịa nke onye na-acha akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ bụ puku iri abụọ na puku ise , dotted jersey la moi poirous in the same way to the friends of the intermediate phase at the top of each isi nrigo ebe nke mbụ ndị na-agba ịnyịnya iru n'elu, ọnụ ọgụgụ nke isi ihe dịgasị dịgasị dabere na nhazi ọkwa nke rịgoro, nke siri ike mgbago, a na-enyekwu ihe ugbu a Onye na-agba ịnyịnya nke nwere ọtụtụ ugwu ugwu na-eyi uwe nwere ntụpọ ma were 25,000 euro soro ya na ngwụsị njem ahụ. Ndị na-ese akwụkwọ na-achọkarị imeri ọkwa dị larịị na-echebe onwe ha pụọ ​​na ifufe n'azụ ndị otu ha ogologo ụbọchị niile na-anwa ịnọ n'akụkụ elu nke ubi ahụ iji zere nsogbu, na-ezere mgbawa nke ngalaba teknụzụ kpatara, mgbanwe mgbanwe, ikuku na-akụ ụdị ihe niile. n'ụzọ nkịtị, mana mgbe ha na-akwa ụta ọ dịghị mgbe ha metụrụ ifufe aka, ha na-ezobe oge niile n'ihu peloton maka narị otu narị mita gara aga ebe ha si n'azụ ndị otu ha pụọ ​​bụ ndị nyere ha nnukwu isi ịmalite imebi mmeri Sprinters mepụtara a ike dị ukwuu ọbụlagodi obere oge ma ị dị oke ọsọ Beingbụ onye na-agba ọsọ bụ ọrụ pụrụ iche ma dị egwu Ọkwọ ụgbọ ala ndị na-emeri agba ọsọ na-esiri ike ịgafe ugwu dị elu Y na-anaghị egekarị ntị site n'aka onye na-agba ọsọ nọ n'otu bes njedebe nke ndị na-agbagharị agbagharị na-abụkarị awa n'azụ ndị mmeri n'ozuzu ha n'ogologo ha nwere ike merie n'ọtụtụ nkebi na njem ahụ. ng ọkachamara Ndị a na-agba ịnyịnya na-arụ ọrụ na ịrịgo ma ha na-eme ndị na-agba ọsọ ọsọ na-abụkarị ndị na-agba ịnyịnya bụ ndị na-achọ iji nweta Njem Nleta iji merie n'ozuzu ha, mana enwekwara ndị na-agbago ọsọ ahụ na-enweghị mmasị na uwe na-acha odo odo. naanị ha nwere otu ihe mgbaru ọsọ, Ndị na-abịa nzukọ ma merie ugwu ugwu.Ugbu a onye na-agba ịnyịnya chọrọ mmeri njem ahụ dum ga-arịgo ugwu ahụ nke ọma ma nwee ike ịmepụta oke oghere na njikọ ahụ wee mee ka ndị asọmpi ahụ tufuo oge dị ukwuu n'ozuzu nguzo otu dara swoop Onye oge ikpe dị mkpa karịsịa na ogbo agbụrụ a ga-ejikarị ga-enwe dịkarịa ala otu mbipụta nke tour de France, ma e nwekwara abụọ ma ọ bụ atọ karịa ndị ọzọ ọtụtụ n'ime otu ndị isi ndị di Iji merie n'ozuzu Nzọụkwụ nke njem ị ga-enwe ike ịmepụta oge dị mma ikpe ikpe oge na-ewekarị oge n'etiti 30 nkeji na elekere ma ndị na-agba ịnyịnya nwere ikike iji merie ndị asọmpi ha site na nkeji ma ọ bụrụ na ha dị ezigbo mma na ya l nhazi ọkwa na oge ikpe ikike ga-enwe nnukwu uru karịa onye Agc na-ese okwu bụ onye na-adabere na ịrị ngwa ngwa na ugwu iji nweta oge ugbu a na mgbakwunye na oge ikpe na-enye oge mgbatị oge maka ndị atọ na-agba ịnyịnya ịgafe njedebe. were sekọnd isii na anọ maka nke mbụ, nke abụọ na nke atọ ebe ladiesla tour de franceam ọzọ na-abịa na pelotone nke ụmụ nwanyị na-ewe izu atọ na-aga na girorosa, agba ọsọ ụbọchị 10 nke na-amalitekarị na july yana a na-ewerekwa ọnọdụ , ụlọ ọrụ na-ahazi njem nlegharị anya na-ahazi usoro nke ịgba ọsọ otu nwanyị nke le tour defrancea nke emere n'otu ụzọ ahụ dị ka ọkwa nke agbụrụ ndị nwoke ruo ọtụtụ afọ.
Nke a bụ ụzọ dị larịị gburugburu champs-elyseesin paris nke ọtụtụ ndị na-agba ọsọ na-echekarị na anyị niile kwenyere na ezigbo ụmụ nwanyị-la tour de france ga-agbanwe ihu ụmụ nwanyị na-agba ịnyịnya igwe ruo mgbe ebighi ebi ma bụrụkwa nnukwu ụzọ iji Egwuregwu ziri ezi n'eziokwu na n'onwe m amaara m na ọ ga-abụ ihe dị ịtụnanya iji nwee ike ịhụ nke a wee bie ndụ dị mma enwere m ihie ụzọ nke kedu ka m si hụ nke a - ebe kachasị amasị anyị ịga leta ndị njem na-agba ọsọ gcn mana mana enwere ike anyi nwere ezi obi ma mana ewezuga njegharị anyi nwere otutu otutu agbụrụ ndi ozo n’aho nile ma gcn di ohuru? Race Pass nwere ihe niile ịchọrọ, ọ nwere ụdị atụmatụ niile dị ka profaịlụ ọkwa, ndepụta mmalite, ihe ngosi kwa ụbọchị mgbe nyocha agbụrụ na ọtụtụ ihe ọma ndị ọzọ, ọ nwere ọtụtụ ihe ịchọrọ, ma ị bụ onye na-ekiri ekiri ma ọ bụ a oge mbụ fanatic a igwe kwụ otu ebe bụ na nke ahụ bụ ya tour de francethe nnukwu show isi ihe omume n'ụzọ nkịtị nnukwu ihe omume nke afọ na agba ụwa njegharị bụ oké mmalite ma ọ bụrụ na ị hụtụbeghị agbụrụ agbụrụ tupu ma ọ bụrụ na ị masịrị isiokwu a, nye anyị ume ma ọ bụrụ na ị maara onye na-abanye ugbu a na ịgba ịnyịnya ígwè ma nwee ike ịchọ ịmata banyere agbụrụ ịgba ịnyịnya na njegharị. Zitere ha edemede a ka ha wee nwee ọ excitedụ, ekele maka ikiri na anyị ga-ahụ gị oge ọzọ
Kedu ihe bụ agba chaa chaa na-agba ịnyịnya ígwè?
Ejiri ya na 1953 na oge emume ncheta iri ise nke Tour de France, ndịacha uhie uhie jersey, nke Skoda na-akwado, na-akwụ ndị na-agba ya ụgwọ na-eduzi nhazi ọkwa kwa ụbọchị. A na-enye ihe aka na nkwụsịtụ na ọkwa nke etiti n'ahịrị.
Enwere ọtụtụ uwe dị iche iche na ụwa ịgba ígwè, mana ị nwere ike ịkpọ ha niile? You mara na ị bụ nke m Amalia Rosa jeans? N'isiokwu a, m ga-ejegharị gị site na ụfọdụ uwe ndị a ma ama na ụwa nke ịgba ígwè, gịnị ka ha na-anọchi anya na ebee? Ha sitere na Ka anyị bido na uwe ndị ịgba ịnyịnya ama ama ama Ọbụna ndị na-abụghị ndị ịgba ịnyịnya ígwè ga-amata na onye ndu nke Tour deFrance ga-eyi akwa ahụ na-acha odo odo. na dị ka mgbe niile, a ga-emeri ọtụtụ agbụrụ ndị bụ isi, dịkwa ka ọtụtụ ụdị ndị ọzọ ga-agba. Nke ahụ bụ na 1919, mgbe Tour deFrance, mgbe ezumike afọ metụtara agha afọ anọ, mere nloghachi ya ụzọ abụọ n'ụzọ atọ na oge 5560-kilomita na nke 325 kilomita, onye isi agbụrụ agbụrụ Onritu Court kpebiri na onye ndu nke agbụrụ ga-apụta site na ndị ọzọ na asọmpi na ya mere tupu ha abụọ amalite ogbo na July 18, 1919 o cean Christophe si France tinyere uwe na-acha odo odo maka oge mbụ, mana n'oge ahụ ọ bụ naanị otu ụzọ iji mee ka ahụ mara onye nduzi agbụrụ, mana oge a agbanweela ịbụ otu n'ime uwe ndị ama ama agbaala agbazigharị, mana ihe kpatara eji ahọrọ agba odo n'ihi na ọ bụ akwụkwọ nkwado akwụkwọ akụkọ iji debe ụbọchị ndị a, ọ bụghị naanị uwe ndị otu ndị edo edo a ga-enwe okpu igwe na-acha odo odo na ngwa igwe kwụ otu ebe mgbe otu n'ime ndị na-agba ha na-eyi uwe na-acha odo odo, nke na-esote ha bụ Jersey Insight kid na m chere na nke kachasị mma bụ uwe polkadot, nke a makwaara dị ka ọ bụ Eze nke Ugwu Jersey ọ bụla dị ịrịba ama ịrịgo. nke njem nwere ihe na elu ugwu, ma ike ọrịrị, ihe ndị ọzọ na-ọdịda, ebe ihe ndị kasị ihe na-na mmalite nke ụbọchị ọ bụla na chi ọbụbọ ntụpọ Jersey ugwu nhazi ọkwa anọwo ebe kemgbe 1933, ma e nwere no jersey Ọ bụghị ruo na 1975 ka e nyere onyinye ọcha ahụ na-acha uhie uhie polkadots mana gịnị kpatara ntụ ntụ polka ihe enweghị ihe ọ bụla jikọrọ ya na van teenswell ọ bụ n'ihi otu n'ime ndị na-akwado chocolate ọdọ mmiri na ọ ga-ekpuchi ụlọ mmanya chocolate na polkadots wee uwe ojii polka bịara na-esote Nke ahụ na-acha akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ obere akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ ahụ a makwaara dị ka Mein karịrị na 1952 Tour deFrance, akwụkwọ ọsọ ọsọ nke meriri site na oke oke a akwụsịla, yabụ ụfọdụ agbamume ndị ọzọ, ndị na-ahazi ewebata green jersey Onye na-agba ọsọ dị ka polkadot jersey onye na-agba ịnyịnya na-anakọta Mbipụta n'okporo ụzọ ahụ, mana ọ bụghị n'ugwu a n'oge a na-agba ọsọ agba agba, mana enwere onyinye maka njedebe, yabụ ndị nhazi ahụ kpebiri iji mee ememe ncheta afọ 50 na 1953 na jikọtara akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ na agba, ọ ga-abụrịrị otu n'ime ndị na-akwado nkwado njem ahụ na aha Sardinia Onye na-acha ọcha ọcha, nke a makwaara dị ka MayanBlanc, bụ nke na-acha odo odo jersey mana maka ndị na-eto eto a is the jersey for the top ranked under 25 inches the general classification Ọ bụ na 1975 mgbe mbụ e ji jesịa mana ọ bụ naanị ndị na-agba ịnyịnya n'ime afọ atọ ndị a mbụ n'ịgba ọsọ ọkachamara, mgbe ahụ na 1983 a gbanwere ya naanị ndị ọkwọ ụgbọala oge mbụ bụ ndị ruru eru, na 1985 a na-enyekwa ya jersey gbanwere n'okpuru ndị ọkwọ ụgbọ ala 25 site na 1989 ruo 1999, mana na 2000 ọ laghachiri ma nọrọ gburugburu ebe ọ bụ na ndị isi na-eduga na Giro themaglia pink Nke a bụ otu ihe ahụ dị ka akwa edo na n'elu, mana ọ bụ pink na agba pink sitere na akwụkwọ akụkọ egwuregwu Italiantali, nke kwụrụ ụgwọ ọsọ ahụ wee bipụta ya na akwụkwọ pink dị iche na jersey ọzọ na jubilation pink jersey ka bụ otu ebe ọ bụ na onyinye mbụ na Giro na-acha odo odo jersey bụ sprinter jersey ọzọ dị ka akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ na-acha akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ na Tour de France ma ọ bụ odo odo Na 1967 agbakwunyela sprint jersey mgbe ahụ ọ bụ uwe na-acha uhie uhie na na 1969 ndị nhazi ahụ kpebiri iji mee ka uwe ahụ na-acha odo odo na-acha odo odo ruo na 2010 mgbe ndị na-ahazi kpebiri ịgbanwe ya na-acha uhie uhie ma na 2017 ha gbanwere ya ma ọzọ na lilajesse Na-acha anụnụ anụnụ, nke a makwaara dị ka Lea Asura brand, bụ nke kachasị mma ịrịgo. jersey, nke bu otu ma o di iche na PolkaDot jersey eji mee ihe na Tour de France. Nke a bu uwe elu ugwu maka Giro na 1974, uwe ahụ ghọrọ nke mbụ a na-enye onyinye otu ugboro na mgbe ahụ ọ na-acha akwụkwọ ndụ ruo mgbe 2012 mgbe onye na-akwado ya bụ Bangkamedal Alaun, ụlọ akụ Italiantali, mere ka nkwado ahụ dị ọhụrụ wee gbanwee na-acha anụnụ anụnụ ọzọ ọ bụghị mgbe niile ka ọ dị mgbe ahụ, mgbe mbuba ahụ malitere na 1931 ọ bụ oroma, mgbe ahụ na 1941 ọ gbanwere ọcha na otu afọ, m wee laghachi. oroma na 1955, nke en ọ gbanwere odo, otu agba dị ka tour de France na ọ nọrọ odo mgbe niile ruo mgbe 1999 na otu na 1977 mgbe ọ gbanwere oroma, acha ọbara ọbara na-acha uhie uhie nakweere na 2010, egwurugwu na-acha uwe pụrụ iche na-enweghị atụ ụwa nke ịgba ịnyịnya ígwè na otu nke ọtụtụ ndị ọkachamara na-agba ịnyịnya ígwè na-arọ nrọ nke Mmeri jersey nke a na-enye onye na-agba ọsọ nke na-emeri asọmpi egwuregwu nke ụwa n'ọtụtụ ọzụzụ nke ịgba ịnyịnya igwe n'adịghị ka ndị ọzọ na-eyi n'oge a na-agba ọsọ ahụ, a na-eyi uwe egwurugwu ahụ n'afọ niile ma ga-enwe agbụrụ mmeri ruo mgbe ọzọ n'asọmpi na azụ ekwe omume nke yi egwurugwu mpe mpe akwa na gị jersey ma na olu akwa ma ọ bụ na aka uwe.
Kedu ihe mere Tour de France ji pụọ iche?
NaNjegharịna-agba ọsọ kwa afọ kemgbe 1903 ma e wezụga maka obere ezumike abụọ n'oge Agha Worldwa. Dika ihe ama ama ya toro, otua ka o siri sie ike: nke mbuNjegharịkpuchie otu nnukwu ngụkọta anyanke2428 kilomita karịrị nanị usoro isii, ma njem nke oge a kpuchiri anyankegburugburu 3,500 km karịrị ngụkọtankeNzọụkwụ 21.
Ndị mmadụ na-ekiri Tour de France?
N'ime mba 188 n'ụwamgbasa oziiheTour de Francena ihe karịrị ijeri 3.5ndị mmadụ na-ekirikwa afọ, n'ihi ya, ọ gaghị esi ike ịchọta ọwa. Eleghị anya ị ga-enwe ikencheọ na egwuregwu ọwa gị USB ebu.
aka na nzopu
Naacha ọcha jersey, ma ọ bụ maillot blanc, na-agakwuru onye isi nhazi ọkwa nke dị afọ 25 ma ọ bụ obere (na Jenụwarị 1 na afọ agbụrụ enyere). N’ikwu ya n’ụzọ dị mfe, ọ na-agakwuru onye na-agba ịnyịnya kasị mma nke nwere oge kasị ala. Maka ndi n’eto eto, ndi nwere obi uto n’agba oso, na-emeriacha ọcha jerseydị ka mmeri edo edo.June 21. 2021
Ndi ndi na-agba okirikiri nke Tour de France na-ege egwu?
Ndị na-agba ịnyịnya ígwèjiriegwumaka ebumnuche dịgasị iche ma naNdị na-agba ịnyịnya Tour de Francegagee ntịna ya na ogologo nnyefe, mgbe na-ekpo ọkụ tupu nkebi ma mgbe obi jụrụ mgbe ọ gasịrị.Jul 18 2016 Nọvemba
Kedu obere ụkwụ nke Tour de France?
Nnwale otu oge nke otu kilomita site na mbido nke 1988Tour de Francebụnke kacha nsoagbụrụ ọ bụla na-agba ọsọ n'ogeNjegharị, ma Guido Bontempi meriri ya na 1 nkeji na 14 sekọnd (ọ ga-abụrịrị na ọ na-egbu mgbu). Ọsọ 1988 nwekwaranke kacha nsoewepụghịogbo, nke bụ naanị 23.6 kilomita.Ọnwa Ise 27, 2021